Antananarivo-Fianarantsoa: zotran-dalamby vaovao | NewsMada
Saika hanafika restaurant… : Nirefodrefotra ny basy, jiolahy roa maty voatifitry ny polisy ...juillet 19, 2019
Premiers ministrables : Des noms circulent à Tsimbazaza ...juillet 19, 2019
Saika hanafika restaurant: nirefodrefotra ny poa-basy, jiolahy roa maty voatifitry ny polisy
Démission du Gouvernement : Christian Ntsay maintenu ou pas ?
Antananarivo-Fianarantsoa: zotran-dalamby vaovao
Par Taratra sur 04/09/2018
Natao sonia tany Beijing Sina, ny 2 septambra teo, ny fifanarahana firaiketana an-tsoratra eo amin’i Madagasikara sy ny orinasa China Road and Bridge Corporation (CRBC). Voarakitr’izany ny hanokafan’ity orinasa sinoa ity zotran-dalamby vaovao hampitohy an’Antananarivo sy Fianarantsoa. Fantatra koa fa efa atao ny fanadihadiana hanavaozana sy hanarenana ny zotra Fianarantsoa mankany Manakara (FCE), sy ny Moramanga-Toamasina.
Manampy ireo, ny hananganana seranan-tsambo any Antsiranana. Hamatsy vola ireo asa ireo ny banky sinoa Exim bank sy ny mpiara-miombon’antoka vahiny hafa. Avy amin’ity banky ity koa ny hanarenana ny lalana RN 5A (Ambilobe-Vohemar), ny rocade Ambohitrimanjaka-Ambohidratrimo, sns.
Voalaza koa fa efa vita sonia ny fifanarahana famatsiam-bola hanamboarana ilay arabe migodana (autoroute) mampitohy an’i Toamasina-Antananarivo. Hiaraka hanao ny asa ny orinasa Anhui Foreign Economic Construction Group Co (AFECC) sy ny Sogecoa.
Hanarenana ny lalam-pirenena fahadimy (RN 5), mampitohy an’i Toamasina-Fenoarivo Atsinanana ny Tahirim-boa hikojakojana ny lalana (Fer) sy ny mpamatsy vola hafa. Hivoaka mialoha ny faran’ny volana oktobra ny vola ary hanomboka ny asa avy eo.
Tena andrasan’ny vahoaka ny fanatanterahana ireo rehetra ireo ary tsy hanaovana azy ho fitaovana politika.
Saika hanafika restaurant… : Nirefodrefotra ny basy, jiolahy roa maty voatifitry ny polisy 19/07/2019
Premiers ministrables : Des noms circulent à Tsimbazaza 19/07/2019
«Can 2019» – Trophée OFC: voahosotra ho mpanazatra mendrika i Dupuis 19/07/2019
Lalaon’ny Nosy (JIOI 2019) – Baolina kitra: nisaraka ady sahala 1 sy 1 i Maorisy sy i Seychelles 19/07/2019
Mpianatra avy any Sambirano: manolotra fampisehoana ho fanatanterahana ny asa sosialy 19/07/2019